Taariikhda Nawaz Sharif - BBC Somali - Warar
Taariikhda Nawaz Sharif
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 12 Mey, 2013, 17:41 GMT 20:41 SGA
Isagoo milatariga uu xukunka ka riday 1999kii, Nawaz Sharif ayaa u eg inuu mar saddexaad noqdo Ra'iisalwasaare kadib doorasho Baarlamaan.
Mr Sharif oo ah 63 jir ayaa la xiray kadibna waddanka uu ka baxay markii milatariga uu la wareegay xukunka, laakiin wuxuu soo noqday doorashadii 2008dii ka hor wuxuuna ahaa mucaarad tan iyo markaas.
Isagoo loo malaynayay inuu guulaysan doono doorashadan, wuxuu ka yaabiyay dad badan guusha uu soo hooyay inta ay la egtahay. Wuxuu kaloo ka adkaaday xisbiga Imran Khan oo siyaasad ahaan muhiim ahaa gobolka Punjab.
Nawaz Sharif ayaa siyaasi wayn waddankiisa ka ahaa ugu yaraan soddon sano. Sida siyaasiyiinta kale wuxuu ka badbaaday eedeymo musumaasuq waqtigaas.
Gudoomiyaha xisbiga (PML-N) oo xukumayay Pakistan laga bilaabo 1977 ilaa 1988 iyo milkiilaha shirkada Ittefaq oo samaysa birta, wuxuu ka mid yahay dadka ugu taajirsan waddanka.
Mr Sharif wuxuu caan ku yahay inuu ahaa ninkii amray in la tijaabiyo hubka nukliyeerka Pakistan 1998.
Sanadihii ugu danbeeyay wuxuu dhaleecayn u soo jeediyay siyaasadaha Maraykanka ee Pakistan iyo Afganistan, waxaana lagu dhaleeceeyay inuu u nugul yahay mintidiinta. Wuxuu hadda u baahan yahay taageerada caalamka si uu u helo gargaar dhaqaale ee uu waddankiisa u baahan yahay.
Mr Sharif waxaa loo arkaa nin ganacsiga taageera oo dad qibrad leh ay la shaqaynayaan, waxaana horyaala inuu xaliyo dhaqaalaha Pakistaan oo hoos u dhacaya, koronto la'aan, musuqmaasuq iyo xaalada ammaanka Pakistan.
Nawaz Sharif Wuxuu Ra'iisalwasaare ahaa November 1990 ilaa 1993 iyo February1997, ilaa markii xukunka milatariga la wareegay 1999 Oktobar.